ကြွယ်ဝပြည့်လျှံသော အသက်တာ – Shwe Canaan
February 11, 2017 Shwe Canaan Uncategorized, ဆောင်းပါး 1
ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အား ရောက်ရှိစေ
ချင်သည့်နေရာ တစ်နေရာ ရှိပါသည်။ ၄င်း
မှာ ကောင်းချီး မင်္ဂလာ ပြည့်လျှံစီးထွက်နေ
သည့် အသက်တာပင် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့
အားလုံး အဲသည်နေရာဆီ ရောက်ဖို့ ဘုရား
ရှင် အလိုတော်ရှိသည်ဟု ကျွန်ုပ်အကြွင်းမဲ့
ယုံကြည်သည်။ ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်း ဟူ သည်
ဘုရားသခင်က သူ့မေတ္တာကို ထင်ရှားပြသပေးသည့်အရာ ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ် ယုံကြည် သည်။ ကျွန်တော့်ကို နားလည်မှုမလွဲပါနှင့်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ငွေအကြောင်း တစ်ခုတည်းကိုပဲ ပြော နေခြင်း မဟုတ်ပါ။ ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းလို့ ပြောသည့်အခါ ငွေလည်းပါတာ မှန်ပါသည်။ သို့သော် သည့်ထက် ပိုပြီး အဓိပ္ပါယ်လေးနက်လှပါသည်။
ဘုရားရှင်က သင်၏၀ိညာဉ်၊ စိတ်နှလုံးနှင့် ကိုယ်ခန္ဓာ သုံးပါးစလုံး ကြွယ်ဝပြည့်စုံဖို့ရန် အလိုရှိပါသည်။ ဒါတင်မက သင်လုပ်ဆောင်နေသော အမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်း၊ လူမှုဆက်ဆံရေးနယ်၊ အိမ်ထောင်ရေး နှင့် အလုပ်အကိုင်စသည့်ကဏ္ဍတို့၌လည်း ကြွယ်ဝပြည့်စုံနေဖို့ရန် အလိုရှိပါသည်။ သူ၏ကတိတော် မြတ်နှင့်အညီ သင့်အတွက် အရာရာ၌ ပိုကောင်းအောင် လုပ်ဆောင်ပေးလိုပါသည်။
ဘုရားရှင်က သူလုပ်ဆောင်ရမည့် အပိုင်းကို လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အပိုင်းက ဆောင်ရွက်ရမည့်အရာများကိုလည်း အဆင်သင့်ထားပေးပြီး ဖြစ်သည်။ သည်အရာကို ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိပါက ဘုရားရှင် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ထားရှိသည့် ပန်းတိုင်သို့မရောက်ရှိပဲ အသက်တာကုန်လွန် သွားနိုင်သည်။
ကြွယ်ဝပြည့်လျှံသော အသက်တာသို့ ရောက်ရှိဖို့ရန်အတွက် အဆင့်(၈)ဆင့်ရှိပါသည်။ အကယ်၍ သင်၏ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သည်ာကွယ်ဝပြည့်လျှံသော အသက်တာသို့ ရောက်ရှိရန် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုလျှင် သည်ဖြစ်စဉ် အဆင့်ဆင့်ကို ကောင်းစွာနားလည် သဘောပေါက်ပြီး လေးစားလိုက်နာရမည်။ အဲသည်ဖြစ်စဉ်က သင့်အသက်တာကို ဘယ်လို ထိတွေ့ပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည် ဆိုတာကို သေသေချချာ ကြည့်စေချင်ပါသည်။
အဆင့်(၁) ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်
‘ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်’ ဟုတ်ကဲ့၊ ဖြစ်စဉ်အထဲရှိ အရာခပ်သိမ်း၏ အစသည် ဘုရားသခင် နှုတ်ကပတ်တော်ပင် ဖြစ်သည်။ သင်၏ပန်းတိုင်ဖြစ်သော ကြွယ်ဝပြည့်စုံသောအသက်တာသို့ အရောက် လှမ်းဖို့ရန် ပထမဦးစွာ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့်သာ အစပြုရမည် (ယော၊ ၁း၁) ၌ ‘အစအဦး၌ နှုတ်ကပတ်တော်ရှိ၏’ ဟု ဆိုထားသည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်သည် မည်သည့်အခါမျှ ပျက်စီးခြင်းမရှိသည့် မျိုးစေ့ဖြစ်ပြီး အမြဲရှင်သန်သီးပွင့် စေဆာတတ်သည့် သဘာဝရှိ သည်။ ၄င်းသည် ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်း၏ မူလအစအဦး (origin) ပင်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ကောင်းချီးမင်္ဂလာတိုက်သို့သွားရာ ဂိတ်တံခါးဝလည်း ဖြစ်သည်။ နှုတ်ကပတ်တော်မပါဘဲ မည်သည့် နည်းနည်းနှင့်မှ ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းကို မရရှိနိုင်ပေ။
ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းဟူသည် ငွေ၌အခြေပြုထားသည့် အရာမဟုတ်။ နှုတ်ကပတ်တော်၌ အခြေပြုထား သည့်အရာ ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ဘယ်လောက်ပင် ပေးလျှပါစေ၊ နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ဖြင့် အခြေမပြုထားလျှင် ထိုငွေကြေးအတွက် အနာဂတ်ရှိမည် မဟုတ်ပေ။ သည်အရာသည် ဘုရားသခင် ၏ နှုတ်ကပတ်တော်မှာ ဖွင့်ပြသည့်အရာ ဖြစ်သည်။ နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ ပါမှသာ ငွေကြေးမျိုးစေ့ ကို တိုးပွားစေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အတော်များများက နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ပါဘဲ ငွေမျိုးစေ့ သက်သက်ကိုပဲ စိုက်ကြဲမိကြသည်။ နောက်ခံတန်ခိုးအင်အား တစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိဘဲ ငွေကြေးမျိုးစေ့ကို ကြဲမိတတ်ကြသည်။
သည်နေရာမှာ ငွေရေးကြေးရေး၌ တစ်ရှိန်ထိုး ထိုးဖေါက်မှု (Funancial breakthrough) တစ်ခါမှ အတွေ့အကြုံမရှိသော တရားဟောဆရာတစ်ဦးအကြောင်း စိတ်ထဲ၌ မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ အလှုငွေ အိတ် သူ့ဆီလာသောအခါ သူတစ်ခုခုတော့ ထည့်လိုက်လိမ့်မည်။ သို့သော် သူ့အတွက် အခြေအနေ တွေက ဘာမှကောင်းလာတာ မမြင်ရပေ။ ဘာကြောင့်လဲ? အဖြေက သူ့အနေနဲ့ ငွေကြေးမျိုးစေ့ကို ပေးလိုက်သော်လည်း ‘ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ထိုးဖောက်အောင် မြင်ခြင်း’ ဟူသည့် ဖွင့်ပြမှုကို လက်ခံရရှိခြင်း မရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ငွေကြေးမျိုးစေ့သက်သက်ကို သာ စိုက်ကြဲပြီး နှုတ်ကပတ်တော် မျိုးစေ့ မပါသောကြောင့် အချည်းနှီးဖြစ်ရခြင်း ဖြစ်သည်။
သင့်အသက်တာ ကဏ္ဍအသီးသီး၌ ကြွယ်ဝပြည့်စုံမှုကို အဆုံးအဖြတ်ပေးသည့်အရာသည် ဘုရား သခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်တည်းဟူသော မျိုးစေ့ပင်ဖြစ်သည်။ ဆရာဝန်က ‘သင်ဖျားနေတယ်’ လို့ ပြောသည့်အခါ နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့က သင့်ကိုချမ်းသာပေးလိမ့်မည်။ အားလျော့စိတ်ပျက်နေသည့် အခါ ၄င်းက သင့်ကို ခွန်အားပေးလိမ့်မည်။ သင့်အိမ်ထောင်ရေး၌ ပြဿနာတွေနဲ့ ရှုပ်ထွေးနစ်မွန်းနေ ချိန်မှာ ၄င်းက ပြန်လည်ကယ်တင်ပေးလိမ့်မည်။ ကြွယ်ဝပြည့်လျှံသော အသက်တာပန်းတိုင်သို့ လျှောက်လှမ်းရာ ခရီးစဉ်၌ နှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့်သာ အစပြုရမည်။
အဆင့် (၂) သင်၏ စဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်း
သင့်အနေနဲ့ လူတွေကို ‘ဘာကြောင့် ခင်င်္ဗျား ကျမ်းစာ ဖတ်ရတာလဲ’ လို့ မေးကြည့်လျှင် ဖြေအမျိုးမျိုး ပေးလိမ့်မည်။ သို့သော် ‘သင် ဘာကြောင့်ကျမ်းစာဖတရသလဲ’ ဟုဆိုလျှင် ၄င်းသည် သင်၏ စဉ်းစား တွေးခေါ်မှုကို လွှမ်းမိုးအုပ်ချုပ်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်တော်ပြောပါမည်။ ၄င်းက သင်၌ မည်ကဲ့သို့သော စိတ်သဘောထားရှိရမည်ကို ဖော်ပြပေးပါသည်။ သည်အရာသည် ပန်းတိုင်သို့ ရောက်ရှိရန်အတွက် ဒုတိယအဆင့်ပင် ဖြစ်သည်။
တစ်နည်းဆိုရလျှင် နှုတ်ကပတ်တော်ကို စဉ်းစား ဆင်ခြင်ခြင်း (သို့) ကြွယ်ဝပြည့်စုံဖို့ရန် စဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်း (Word thinking (or) Prosperos thinking) ဖြစ်သည်။
၃ယော အငယ် ၂ ၌ ‘အချင်းချစ်သူ၊ သင်၏ စိတ်နှလုံးသည် ကောင်းစားသကဲ့သို့ သင်သည် အရာရာ၌ ကောင်းစားခြင်းနှင့် ကျန်းမာခြင်းရှိမည်အကြောင်း ငါဆုတောင်း၏’ ဟုဖော်ပြထားသည်။ သင့်အသက် တာ၏ ကြွယ်ဝပြည့်စုံမှုသည် သင်၏စိတ်နှလုံး အသိစိတ် (mind)၊ ဆန္ဒစိတ် (will) နှင့် ခံစားစိတ် (emotion) ၏ ကြွယ်ဝပြည့်စုံမှုအပေါ်၌ မူတည်နေပါသည်။
သင် စဉ်းစားတွေးထင်သည့်အတိုင်း သင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ (You will be as you think) သုတ္တံ ၂၃း ၇ ၌ ‘သူသည် စိတ်ထင်သည့်အတိုင်း ဖြစ်၏’ ဟု ဆိုထားသည်။ အကယ်၍ သင်သည် သင့်စိတ်ထဲ၌ ‘ဘ၀တစ်ခုလုံး ဆင်းဆင်းရဲရဲ နေရမည်’ ဟု စဉ်းစားတွေးထင်လျှင် အဲသည်အတိုင် သင်၌ ဖြစ်လိမ့် မည်။ အကယ်၍ သင်သည် ငွေကြေးအကြပ်အတည်းကို ထိုးဖေါက်အောင်မြင်နိုင်လိမ့်မည်ဟု စဉ်းစား တွေးထင်လျှင် သင်၌ အမှန်ပင် ဖြစ်လိမ့်မည်။
သင် ဘယ်လိုတွေးခေါ်နေတယ်ဆိုတာ ယခုပင် ဆန်းစစ်ပါ။ သင်၌ ဆင်းရဲချို့တဲ့မည်၊ ဖျားနေမည်၊ ရှုံးနိမ့်မည်ဆိုသည့် အတွေးကို စဉ်းစားတွေးခေါ်နေပါသလား? သင်၏ အတွေးအခေါ်၌ ဖြစ်နေသော အရာက လွှမ်းမိုးနေသနည်း? ယနေ့ သင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်ခဲ့သည်အတိုင်း အကောင်အထည် ပေါ်လာ ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆင့် (၃) သင်၏ စိတ်ခံစားမှု
ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်က သင့်အား မှန်ကန်သော စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုပြုရန် ဦးဆောင်ကူညီ ပေးမည်။ ၄င်းစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုက သင့်အား နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ညီသော စိတ်ခံစားမှုကို ဖြစ်စေလိမ့်မည်။
စိတ်ခံစားမှုများသည် ဘုရားပေးသည့် လက်ဆောင်တစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။ ယေရှုကိုယ်တိုင် စိတ်ခံစားမှု ရှိခဲ့သည်။ ကျမ်းစာက ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆင်းရဲဒုက္ခများကြောင့် ကြင်နာသနားမှုဖြစ်ပေါ် လာသည်ဟု ဖော်ပြထားသည် (ဗြဲ ၄း ၁၅)။ စိတ်ခံစားမှုရှိတာကောင်းပါသည်။ သို့သော် စိတ်ခံစားမှုက ကျွန်ုပ်တို့ကို လုံးဝထိန်းချုပ် သွားသည်အထိ မဖြစ်အောင်တော့ အမြဲသတိပြုရမည်။
စိတ်ခံစားမှုဟူသည် နာကျင်မှု (သို့) ၀မ်းပမ်းတသာ ပီတိဖြစ်မှု တစ်ခုခုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် စိတ်အခြေအနေ တစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး သင့်ကို တစ်စုံတရာအတွက် တွန်းအားပေးသည့်အရာ ဖြစ်သည်။ ဘုရားရှင်က သင့်အား စိတ်ခံစားမှုကို ပေးထားသည်မှာ မှန်ပါသည်။ သို့သော် ၄င်းကို ထိန်းချုပ်တတ် ဖို့ သင်မသိပါက သင့်အတွက် မလိုလားအပ်သောအရာများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
တစ်ခါတစ်ရံ စာတန်မာရ်နတ်က ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်လမ်းမှ လွဲချော်သွားစေရန် သင်၏ စိတ်နှလုံးအားဖြင့် သွေးဆောင်ဖျားယောင်း တတ်သည်ကို သတိပြုပါ။ မာရ်နတ်က ယေရှုအား ဂေသရှေမာန်ဥယျာဉ်ထဲ၌ သည်နည်းအတိုင်း ကြိုးစားခဲ့ပါသည်။ ကိုယ်တော်သည် အလွန်စိတ်ပူပန် ညှိုးငယ်ခြင်းရှိသည့်အတွက်ကြောင့် ကိုယ်မှ ထွက်သောချွေးသည် သွေးစက်ခဲကဲ့သို့ ဖြစ်ပေ၏။
မိမိ၏ စိတ်ခံစားမှုက မိမိကို မလွှမ်းမိုးသွားမည်အကြောင်း ကိုယ်တော်သည် တွန်းလှန်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့ ကိုယ်တော်သည် ဆန့်ကျင်တွန်းလှန်ရင်း ရှေ့သို့အနည်းငယ်လွန်သွားလျက် ဆက်လက် ဆုတောင်းနေခဲ့သည် (မာ၊ ၁၄း ၃၄ -၃၅)။ သင်၏ စိတ်ခံစားမှုက သင့်အား ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်လမ်းမှ လွဲချော်သွားစေရန် လှုံ့ဆော်သည့်အခါ ယေရှုကဲ့သို့ ရှေ့ဆက်လှမ်းပြီး ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ကို ၀န်ခံလျက် ဆုတောင်းပါ။ စိတ်ခံစားမှုနောက်သို့ မလိုက်မပါမိစေရန် သတိပြုပါ။ အမှန်စင်စစ် သင်၏ စိတ်ခံစားမှုကို အနိုင်ယူနိုင်သည့် အခွင့်အာဏာကို ဘုရားရှင် ပေးအပ်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
အဆင့် (၄) သင်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်
ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်ခံစားမှုအပေါ်မှာ မည်ကဲ့သို့ ထိန်းချုပ်မည်နည်း ဆိုသည်မှာ အလွန်ပင် အရေးကြီး လှပါသည် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်ခံစားမှုအပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ချမှတ်တတ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဘ၀ဟူသည် ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် ပြည့်နေသောလမ်းခရီးတစ်ခု ဖြစ်၏။ (Life isaseries of decisions) နေ့စဉ် နံနက်တိုင်း သင်အိပ်ယာထသည်နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို သင်ချရစမြဲဖြစ်၏။ တရားဟောရာကျမ်း ၃၀း ၁၉ အရသင်သည် လွတ်လပ်သောကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး ဖြစ်၏။ အသက်ရှင်ခြင်း (သို့) ကောင်းချီးပေးခြင်း (သို့) ကျိန်ခြင်းတစ်ခုခုကို သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဘုရား သခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ဆီလျှော်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များကို သင်ချမှတ်သည့်အခါ ကောင်းကင် ဘုံသည် သင့်နောက်မှ ရပ်တည်ပေးလိမ့်မည်။ ခိုင်မာသောဆုံးဖြတ်ချက် ချပြီးနောက် ယေရှုခရစ် တော်၏ အစီအစဉ်၌ ကြားဖြတ်ဝင်ရောက်လာသူ တရားဇရပ်မှုးယာဣရုအကြောင်း ခဏဆင်ခြင် ကြည့်ပါ။
‘ယေရှုသည် ကမ်းတစ်ဖက်သို့ ကူးပြန်၍အိုင်နားမှာရှိတော်မူစဉ် များစွာသော လူအပေါင်းတို့သည် အထံတော်၌ စုဝေးကြ၏။ ထိုအခါ ယာဣရုအမည်ရှိသော တရားဇရပ်မှုးသည်လာ၍ ကိုယ်တော်ကိုမြင် လျှင် ခြေတော်ရင်း၌ ပျပ်ဝပ်လျက်၊ အကျွန်ုပ်၏သမီးငယ် သေလုပါပြီ။ သို့သော်လည်း ကိုယ်တော် သည် ကြွ၍ သူ့ကိုကယ်တင်ခြင်းငှာ သူ၏အပေါ်၌ လက်ကိုတင်တော်မူလျင် အသက်ရှင်ပါလိမ့်မည်ဟု များစွာတောင်းပန်၏’ (မာ၊ ၅း ၂၁-၂၂)။
ယေရှုခရစ်တော် ဘာလုပ်ခဲ့သလဲ? အငယ် ၂၄ တွင် ကြည့်ပါ။ ‘ကိုယ်တော်သည် သူနှင့်အတူသွား၍’ ဟု ဖော်ပြထားသည်။ သင် သတိပြုမိပါသလား။ ယေရှုသည် လှေပေါ်မှ ဆင်း၍ သူ၏အသက်တာ၌ ရှိသော ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ကို ပြိးပြည့်စုံစေရန် အသင့်ဖြစ်နေပါသည်။ သို့သော် ယာဣရုက ကြားဖြတ်ဝင်ရောက် လာသောအခါ ယေရှုသည် သူနှင့်အတူ ကြွသွားတော်မူပါသည်။
အငယ် ၂၈ ကို ဆက်ကြည့်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သော အခြေအနေမှာပင် သွေးသွန်နာစွဲသော မိန်းမ တစ်ယောက် ရောက်ရှိလာသည်။ သူမလည်း ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို ချမှတ်ခဲ့သည်။ ‘ငါသည် အ၀တ်တော်ကိုသာ တို့လျှင် ချမ်းသာရမည်’ ဟုဆိုခဲ့သည်။ ယေရှုအနေနဲ့ ချက်ခြင်း အဲဒီနေရာမှာဘဲ ရပ်ပြိး အနာငြိမ်းပေးခဲ့သည်။ မကြာခင်မှာပဲ ယာဣရုရဲ့ သမီးလည်း ချမ်းသာရာ ရခဲ့ပါသည်။
၄င်းအဖြစ်အပျက် (၂)ခုစလုံး၌ ယေရှုသည်တစ်စုံတစ်ခုသောအရာကို ပြုလုပ်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤနေရာ၌ အလွန်တန်ခိုးကြီးသော ၀ိညာဉ်ရေးရာနိယာမတစ်ခုကို တွေ့နိုင်သည်။ ၄င်းမှာ ယေရှုသည် ခမည်းတော်ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့်အညီ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်တန်သောလက်သို့ ကိုယ်တော်၏ အမှုတော်မြတ်နှင့် ဘိသိက်ခြင်းကို လွှဲအပ်ပေးလျက်ရှိသည်ဆိုတာပဲ ဖြစ်သည်။ ထိုအတွက်ကြောင့် သင်သည် ကိုယ်တော်၏အလိုတော်နှင့်ညီသော ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ချမှတ် သည့်အခါ ကိုယ်တော်သည် ရပ်တန့်လျက် သင့်ဘက်သို့ လှည့်လျက်၊ သင့်အိမ်၏ ၀န်ထုတ်များ၊ တံပိုးများကို ဖယ်ရှားပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ အစွမ်းတန်ခိုးထက်လှသော ဆုံးဖြတ်ချက်၏ ရလဒ်ပင်ဖြစ်သည်။
အဆင့် (၅) သင်၏ အပြုအမူ
သင်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များအတိုင်း သင်၏အပြုအမူက ပေါ်လွင်လာလိမ့်မည်။ ‘အကျင့်နှင့်ကင်းသော ယုံကြည်ခြင်းသည် တစ်ပါးတည်းဖြစ်သောကြောင့် အသေဖြစ်၏’ (ယာ၊ ၂း ၁ရ) ဟု ဆိုထား၏။ ထိုကြောင့် သင်ဆုံးဖြတ် ထားသည့်အတိုင်း စတင်ပြောဆိုပါ။ သင့်အနေနဲ့ ဒေါ်လာ ၅၀၀ တန် ၀တ်စုံတစ်စုံ ၀ယ်ဖို့ရန် လောလောဆယ် မဖြစ်နိုင်သေးပေးမယ့် သန့်ပြန့်သည့် ၀တ်စုံတစ်စုံလောက် တော့ ၀တ်ပြီး နက်ကတိုင် လှလှတစ်ခု တပ်လိုက်ပါ။ ပြီးတော့ လက်ကိုင်ပ၀ါတစ်ခုလည်း အိပ်ကပ်ထဲ ထည့်ထားလိုက်ပါ။ ကြွယ်ဝပြည့်လျှံသောအသက်တာထဲမှာ စတင်သရုပ်ပြပါ။ ဘုရားသခင်သည် သင်၏ အမူအရာကို ချိန်ဆလျက်ရှိပါသည် (၁ရာ၊ ၂း ၃)။ ထို့ကြောင့် သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကို စတင် လုပ်ဆောင်ပါ။
သင်၏ အမူအရာ၊ အပြုအမူက သင်၏ ယုံကြည်ချက်ကို ပြသနိုင်ပါစေ။
အဆင့် (၆) သင်၏ အကျင့်စရိုက်
သင်၏ အပြုအမူက သင်၏ အကျင့်ဘယ်လိုရှိမယ်ဆိုတာ အဆုံးအဖြတ် ပေးလိမ့်မည်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း သင်ပြုမူသမျှသည် သင်၏ အလေ့အကျင့် ဖြစ်လာမည်။ ထိုကြောင့်နေ့စဉ် သင်ဘာတွေလုပ်သလဲ (သို့) ပြောနေသလဲ ဆိုတာပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါ။ အကြောင်းမူကား သင်ပြုမူပြောဆိုသမျှအတိုင်း သင်၌ ဖြစ်လာမည်။ အကယ်၍ သင်သည် လိမ်ညာပြောပါက လူလိမ်တစ်ဦးဖြစ်လာဖို့ အလားအလာရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၊ ရုပ်ရှင်များကြည့်ရှုခြင်းကို တိတ်တခိုးပြုလုပ်ပါက ၄င်းအမူအကျင့်များ သင်၌ စွဲကပ်လာလိမ့်မည်။ ထိုကြောင့် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့် ဆန့်ကျင့် ဘက်ဖြစ်သော အကျင့်စရိုက်များ သင်၌ မစွဲကပ်စေရန် သင်၏အပြုအမူကို သတိပြုထိန်း သိမ်းပါ။
အဆင့် (၇) သင်၏ အကျင့်စာရိတ္တ
သင်၏ အကျင့်စရိုက်များက သင်၏စာရိတ္တဘယ်လို ရှိမယ်ဆိုတာ အဆုံးအဖြတ်ပေးလိမ့်မည်။ စာရိတ္တဆိုသည်မှာ လူတွေက သင့်အပေါ် ရှုမြင်သုံးသပ်သည့် အရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။
သင်၏ စာရိတ္တဘောင်ထက် ပိုလွန်ပြီး သင်ဟာ အမြင့်သို့ ရောက်မလာနိုင်ဘူးဆိုတာ နားလည် သဘောပေါက်ပါ။ နှစ်အတန်ကြာက ကျွန်ုပ်၏ ညီအစ်ကို ကဲနက်(သ်)ခုပ်လန်းပြောခဲ့တာကို သတိရမိ ပါသည်။ အကျင့်စာရိတ္တဆိုတာ မှန်ကန်တဲ့အရာကို မှန်ကန်စွာပြုလုပ်ခြင်းဟု ဆိုပါသည်။ တကယ် တော့ ကျွန်ုပ်တို့ရှိရမည့် အကျင့်စာရိတ္တကတော့ ယေရှုခရစ်တော်၏ အကျင့်စာရိတ္တပင် ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်၏ အကျင့်စာရိတ္တကဘာလဲ၊ ‘ချစ်ခြင်းမေတ္တာ’ ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အဂါပေ ချစ်ခြင်း မေတ္တာ၌ တည်သော အကျင့်စာရိတ္တကို တည်ဆောက်ရမည်။ သို့မှသာ လူတွေက ထိုမေတ္တာဖြင့်ချစ် တတ်ရန် သင်ယူနိုင်ပေသည်။
အဆင့် (၈) သင်၏ ကံကြမ္မာ
နောက်ဆုံးပြောရလျှင် သင်၏ အကျင့်စာရိတ္တက သင့်ရဲ့ကံကြမ္မာ ဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာကို အဆုံး အဖြတ်ပေးလိမ့်မည်။ သင်၏ ခရီးဆုံးပန်းတိုင်က ဘာလဲ? ယော ၁၀း၁၀ ၌ ယေရှုက ‘ငါမူကား၊ သိုးတို့သည် အသက်လွတ်ရုံမျှမက အသက်နှင့် ပြည့်စုံစေခြင်းငှာ လာသတည်း’ ဟု ဆိုထားပါသည်။ ကြွယ်ဝပြည့်လျှံ၍ ၀မ်းမြောက်ခြင်းနှင့် ပြည့်စုံသောအသက်တာပင် မဟုတ်ပေလော။
နှုတ်ကပတ်တော်က သင်၏ စဉ်းစားတွေးခေါ်မူကို ထုတ်လွှတ်ပေးသည်။ သင်၏ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုက သင်၏ စိတ်ခံစားမှုကို ထုတ်လွှတ်သည်။ သင်၏ စိတ်ခံစားမှုက ဆုံးဖြတ်ချက်မှတ်ရန် လုပ်ဆောင်ပေး သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းက အမူအရာကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သင်၏ အကျင့်စာရိတ္တက သင်၏ ဘ၀ကံကြမ္မာကို ဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်။ သင့်ဘ၀ ဘယ်လို အဆုံးသတ်မလဲ ဆိုသည်က အဲသည်ဖြစ်စဉ် ထဲမှာ သင်ဘယ်အရာကို ဘယ်လိုဆုပ်ကိုင်သလဲအပေါ် မူတည်ပါသည်။
သင်သည် ကြွယ်ဝပြည့်လျှံသော အသက်တာဖြင့် အသက်ရှင်ဖို့ရန် ဘုရားသခင်က ကြံစည်ထားပြီး ဖြစ်သည်။ သင်သည် ကိုယ်ခန္ဓာကျန်းမာခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်းအပြည့်ဖြင့် ကြွယ်ဝချမ်းသာသူဖြစ်ရန် ဘုရားသခင်က ရှေးမဆွကပင် ကြံစည်ထားပြီး ဖြစ်သည်။ သင့်ကို ဘုရားရှင်က ပျော်ရွှင်သော လူတစ်ဦးအဖြစ် ခေါ်ထားပြီး ဖြစ်သည်။ သင်၏ အသက်တာ၌ သန့်ရှင်းကြည်လင်စွာဖြင့် ဘုရားရှင်နှင့် မိတ်သဟာယဖွဲ့ရန် ပြင်ဆင်ထားပြီး ဖြစ်သည်။
‘ကြွယ်ဝပြည့်လျှံသော အသက်တာ’ ဟုတ်ကဲ့။ အဲသည်အရာက သင့်အတွက် ဤကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိ ခရီးဆုံးပန်းတိုင်ပင် ဖြစ်ပါသည်။